चिहानबाट खनेर निकालिएको श्रीमतीको अवशेषसँग १६ वर्षदेखि सँगै सुतिरहेछन् यी व्यक्ति (भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चिहानबाट खनेर निकालिएको श्रीमतीको अवशेषसँग १६ वर्षदेखि सँगै सुतिरहेछन् यी व्यक्ति (भिडियो)
यतिबेला हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको स्वास्थानीको ब्रत चलिरहेको छ । स्वास्थानिको कथामा एउटा अध्याय छ । जसमा सतिदेवीको निधन पछि भगवान शिवले उनको वियोग सहन नसकेर उनको श व लिएर विश्व भ्रमण गरेका थिए । उनको श व कुहिएर टु’क्रा टु’क्रा भएर नसकिँदा सम्म शिवले सतिदेवीको श व काँधमा बोकेर विश्वभर डुले । यो त एउटा धार्मीक कथा भयो । यस्तै कथासंग मेल खाने एउटा वास्तविक कथा पनि यो धर्तीमा छ ।
भियतनामका एक जना पुरुषले श्रीमतीको निधन भएपछि उनको वियोग सहन नसकेर श व गा’डेको स्थानवाट उनको अवशेष निकालेर त्यही अबशेषसंग १६ वर्ष देखि सुतिरहेका छन् । श्रीमतीको निधन सहन नसकेर उनले गा डेको चि’हान खनेर अवशेष निकाले, त्यसलाई प्लास्टर गरिएको मूर्तीभित्र राखे । उक्त मूर्तीसँग उनी विगत १६ वर्षदेखि सुतिरहेका छन् ।
जब ली भान नाम गरेका यि ब्यक्तिको यो वास्तविक कथा पत्याउन कठिन पर्छ । यो घटना सन् २००९ मा सार्वजनिक भए पनि धेरैले विश्वास गरेनन् । आफन्त र छिमेकीले प्रहरीकहाँ उजुरी दिएपनि उनले आफ्नो मायालाई भने छोड्न सकेका छैनन ।
भानको सन् १९७५ मा विवाह भएको थियो । निकै सानो उमेरमा विवाह भएका उनीहरुको ७ सन्तान भए । विवाह पछि यी दुईको प्रेम झाङ्गियो, उनीहरुको जीवन निकै खुसी साथ जिवन विताइरहेका थिए । ली भान सेनामा कार्यरत थिए । भानले सन् २००३ मा श्रीमतीको अचानक निधन भएको खबर पाए । उनी घर हानिए तर उनी घर पुग्नु अगावै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेर गा’डिसकिएको थियो ।
उनले श्रीमतीको वियोग सहन नसकेर केही समय श व गा डेको स्थानमै गएर सुत्न थाले । जव वर्षाको समय आयो उनले श व नजिकै खा’ल्डो बनाएर त्यहीँ सुत्न थाले । छोराछोरीले थाहा पाएपछि उनलाई त्यसो गर्न दिएनन् । त्यस पछि उनले चिहान खने, त्यसपछि श्रीमतीको हड्डी जम्मा गरेर ब्यागमा राखे । त्यसपछि उनले महिलाको आकृति दिइएको एउटा खोक्रो मूर्तीलाई सिमेन्ट, प्लास्टर, बालुवा, ग्लूको प्रयोग गरेर बनाए र त्यसभित्र श्रीमतीको अवशेष राखे । त्यसपछि त्यो मूर्तीलाई आफू सुत्ने बेडमा राखे । त्यस दिनदेखि आजसम्म उनी श्रीमतीको अवशेषसँगै सुतिरहेका छन् ।
छोराछोरीले जति भने पनि उनले त्यो क्रम छोडेका छैनन् । आफु घर बाहिर भएका कारण श्रीमतीलाई नयाँ लुगा लगाइदिने अवसर नपाएको उनलाई पछुतो छ । त्यसैले प्रत्यक दिन श्रीमतीलाई दुई पटक लुगा फेरीदिन्छन् । मेकअप गरेर राम्री पार्छन ।
इबोलाको औषधि रेमडिसिभिरबाट नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचार सफल, स्वास्थ्य परिषद्‌ले परीक्षण र विभागले आयातको अनुमति दियो
खुशीकाे खबर २४ घण्टामा ७५ संक्रमणमुक्त, हालसम्म १३ हजार १२८ ले जिते कोरोना
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य !
पुल्चोक आन्दो’लनः प्रहरीको वाटर क्यानन क्ष’तिग्र’स्त, त्यसमाथि थपियो तो’डफो’ड, आन्दोलन’कारीले प्रहरीको मोटरसाइकल समेत जला’ए
रहेनन् सलमान खानसँग ‘रेडी’मा काम गरेका छोटे अमर चौधरी